पत्रिकामा टाँसिएको खानेकुरा खानुहुन्छ ? क्यान्सर होला, पुरा पढ्नुहोस् - ramechhapkhabar.com
पत्रिकामा टाँसिएको खानेकुरा खानुहुन्छ ? क्यान्सर होला, पुरा पढ्नुहोस्
हरियो धनियाँ स्वाद र सुगन्धको लागि भान्सामा प्रयोग गरिन्छ जसले तरकारीलाई स्वादिलो र वास्नादार बनाउँछ । यसले भान्सालाई सुगन्धित मात्र बनाउने होइन यसबाट अन्य धेरै खालका फाइदा पनि छन् । हरियो धनियाँ खाँदा अरुचिका समस्या भएकाहरुलाई निकै फाइदा हुन्छ । त्यसका लागी चटनी वा तरकारीमा धनियाँ मिसाएर खाँदा फाइदा हुन्छ ।
शारीरिक रुपमा कमजोर हुनु भएको छ भने धनियाँको जुस पिउनुस् निकै फाइदा हुन्छ । त्यस्तै आखाका समस्या भएकाहरुले पनि हरियो धनियाँ प्रयोग गर्दा फाइदा पुग्छ । हरियो धनियाँको प्रयोगले पाचन प्रकृयामा समेत प्रभाव पार्छ । पेटमा रहेका किटाणुलाई पनि धनियाँले मार्छ । सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हरियो धनियाँ खादा रगल शुद्ध हुन्छ वा यसले शरीरमा रगतलाई शुद्धीकरण गर्न सहयोग गर्छ ।